Shiinaha saxsanaanta wax taaj oogidda oogada Sanduuqa 618S Soo saar iyo Warshad | BiGa
Sax wax taaj oo kale Furimaha Dagaalka 618S
Qaab-dhismeedka: Dareenka ugu weyn waxaa laga sameeyaa bir bir ah oo xeel-dheer, waana la demiyaa si looga takhaluso isku-buuqa gudaha, si loo hubiyo saxsanaanta sare, sare. adkaanta iyo kordhinta nolosha adeegga.
Tareenka Slide: tareenka labajibbaaranaha ah ee 'V V' ee dhinacyada oo dhami wuxuu ku dhegan yahay TURCITE-B oo ah suunka tareenka weyn ee Talyaanigu xirto isla markaana la xoqo si sax ah si uu u noqdo mid simbiriirixan oo isdifaac leh.
Qaabeynta gaarka ah:
Qaab dhismeedka:tuurista ugu weyn waxaa laga sameeyaa bir bir ah oo xeel dheer oo bir ah waxaana loo demiyaa si looga takhaluso isku buuqa gudaha, si loo hubiyo saxsanaanta sare, sare. adkaanta iyo kordhinta nolosha adeegga.
Xadiidka tareenka: tareenka laba dhinac ee V-ga ah wuxuu ku dheggan yahay TURCITE-B oo ah suunka tareenka weyn ee Talyaani xirta ee u adkeysta xirmooyinka si sax ahna loo xoqo si looga dhigo mid simbiriirixan kara isla markaana xirxiraya.Waxaa ugu habboon sameynta shiidi.
Dunmiiqa:Nooca toosan ee dunmiiqa waxaa loogu talagalay is dhexgalka nooca kaydadka, waxaana laga sameeyaa cufnaan heer sare ah oo cilmiyaysan oo heerka Jarmalka ah P4. Dunmiiqa waa ka buuq yar yahay, gariirka yar iyo culeyska sare wuxuuna ku habboon yahay jarista xoqidda iyo dhammaan noocyada wax shiida.
Nidaamka sifaynta otomaatiga:Waa nooc loop ah Nidaamka sifaynta otomaatiga. Saliida waxay si otomaatig ah u wareejin kartaa una siin kartaa saliid qasab ah dhammaan boolal iyo tareenada iswada. Nidaamka saliidaynta otomaatiggu wuxuu si weyn u yareyn karaa heerka xirashada tareenka slide Waxaa jira muraayad saliid ah oo ka koreysa safka si loo hubiyo xaaladda saliidda.
Nidaamka wadista shaqada:Waxay u isticmaashaa silig bir isku xidhan silsilad wadashaqeyn leh si loo yareeyo bedelka siligga birta ah. Suunka iskudhafka ah wuxuu kuxiran yahay shaashad shaqeynaysa oo leh iskuxir dabacsan si loo hubiyo wadista habsamida.
Naqshadeynta socodka bilaashka ah:Waxay saliid ku siin kartaa tareenka is dul saaran cadaadiska joogtada ah. Sidaa darteed, Naqshadeynta ayaa tirtiri karta qaladka saxnaanta tareenka slide ee shaqeeya oo ay keeneen saliidda saliidda elektromagnetic.
Model 618S 614S
Faahfaahinta Main Cabbirka miiska shaqada 150x450mm 150 × 380mm
Max.Length of shiidi 475mm 375mm
Max. Dheereynta shiidi 160mm 160mm
Fogaanta laga bilaabo xarunta dunmiiqa ilaa miiska shaqada 350 ~ 400mm 350 ~ 300mm
Cabbirka caadiga ah ee diskka magnetic 150x400mm 150x400mm
Quudinta guud Faalig gacmeed 480mm 380mm
Quudinta Longitudinal Faalig gacmeed 180mm 180mm
Gacan-ku-wareejinta kacaan kasta 5mm 5mm
Handwheel halkii qalin qalin on 0.02mm 0.02mm
Quudinta toosan Gacan-ku-wareejinta kacaan kasta 1mm 1mm
Handwheel halkii qalin qalin on 0.005mm 0.005mm
Wheel shiidi Cabirka (OD * W * ID) Φ180x13xΦ31.75 Φ180 × 13 × 131.75
Xawaaraha dunmiiqa (50Hz / 60Hz) 2850 / 3600RPM 2850 / 3600RPM
Gawaarida Mashiinka dunmiiqa 1.5HP 1.5HP
Cabirka mashiinka L * W * H 1300x1150x1980mm 1300 × 1150x1980mm
Miisaanka mashiinka Miisaanka guud 750kg 690kg
Hore: PCLS200400NC / PCLS200600NC / PCLS200800NC / PCLS250800NC Nooca Beam-madaxa laba-madaxa mashiinka shiidi mashiinka
Xiga: Mashiinka Mashiinka Mashiinka CNC EDM (HD-450CNC)
Mashiinka Mashiinka Mashiinka Mashiinka Dusha Sare
Mashiinka Mashiinka Mashiinka Mashiinka Mashiinka Lagu Dhufto Double-End
Mashiinka Mashiinka Mashiinka Mashiinka Cagaaran
Mashiinka Mashiinka Mashiinka Mashiinka Hal-Dhamaystiran
Mashiinka Mashiinka Mashiinka Dusha sare
Nooca Gawaarida Mashiinka Mashiinka
PCA2550 Mashiinka shiidi dusha sare
PCA3060 Mashiinka shiidi dusha sare
Mashiinka Mashiinka Mashiinka Mashiinka Dusha Sare, Nooca Gawaarida Mashiinka Mashiinka, Mashiinka Mashiinka Mashiinka Mashiinka Cagaaran, Mashiinka Mashiinka Mashiinka Mashiinka Mashiinka Lagu Dhufto Double-End, Mashiinka Mashiinka Mashiinka Dusha sare, Mashiinka Mashiinka Mashiinka Mashiinka Hal-Dhamaystiran,